Xiaomi အသုံးပြုသူများအတွက် MIUI ROMs တွေရဲ့ မတူကွဲပြားခြားနားပုံတွေကို လွယ်လင့်တကူ နားလည်သိရှိနိုင်စေဖို့ရန်အတွက် ပို့စ်လေးတစ်ခု တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Xiaomi Xiaomi အသုံးပြုသူများအတွက် MIUI ROMs တွေရဲ့ မတူကွဲပြားခြားနားပုံတွေကို လွယ်လင့်တကူ နားလည်သိရှိနိုင်စေဖို့ရန်အတွက် ပို့စ်လေးတစ်ခု တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Anonymous at 8:15:00 AM Xiaomi,
#‎Stable‬ ROMs ဆိုတာ ???
Stable ROMs တွေကို MIUI Official Developers များက ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်လတစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) နှစ်လတစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) အချိန်အတော်ကြာမှတစ်ကြိမ် (Bugs မရှိပါက) Update version ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Stable ROMs အများစုဟာ Bugs (Errors) အနည်းဆုံးသော ROMs တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အသုံးပြုသူ သင့်အနေနဲ့ Errors (Bugs) ကင်းတဲ့ Stable ဖြစ်တဲ့ ROMs ကိုသဘောကျသည်ဖြစ်စေ၊ New Features တွေကို ထွက်ထွက်ချင်း အသုံးမပြု (မစမ်းချင်သူ) လိုသည်ဖြစ်စေ Stable ROMs ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Stable ROMs တွေရဲ့ Version တွေကို ယခုလိုခွဲခြားလို့ရပါတယ်။ ( ဥပမာ - MIUI7stable version is V7.X.X.0 XXXXXXX ဆိုကြပါစို့။ v7 ကတော့ MIUI ရဲ့ Main version ကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒုတိယမြောက် X.X ကတော့ MIUI version number ကိုဆိုလိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးက XXXXXXX တွေကတော့ ROMs ရဲ့ Country code နဲ့ Android Version ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
MIUI Official Stable ROMs တွေကို ဒီ Links ကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ် >en.miui.com/download.html
‪#‎Ported‬ ROMs ဆိုတာ ???
Ported ROMs တွေကို UnOfficial Developers တွေနဲ့ Third-party Developers တွေကနေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Ported ROMs တွေဟာ MIUI Developer ROMs တွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ MIUI Ported ROMs တွေမှာလည်းပဲ Developer ROMs တွေကဲ့သို့လိုပဲ Version တွေကို ယခုလိုခွဲခြားလို့ရပါတယ်။ ( ဥပမာ - Samsung Galaxy Note 3/ n9005_4.9.26 ဆိုပါစို့ ဒါကို n9005_x.y.z လို့သတ်မှတ်ကြည့်ရအောင်၊ X ဆိုတာ ၄င်း ROMs ထုတ်လုပ်တဲ့ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကို ဖော်ပြတာပါ၊4ဆိ်ုတော့ 2014 ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ y ဆိုတာက ၄င်း ROMs ထုတ်လုပ်တဲ့ လ ကိုပြောချင်တာပါ၊9ဆိုတော့ September လကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ z ဆိုတာက ၄င်း ROMs ထုတ်လုပ်တဲ့နေ့ရက်ကို ဆိုလိုတာပါ၊ 26 ဆိုတော့ 26 ရက်နေ့ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Ported ROMs တွေဟာ MIUI Developer ROMs တွေပေါ်မှာ အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး ၄င်း Developer ROMs ဟာ Ported ROMs ထုတ်ပေးတဲ့ ဖုန်းအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် Developer ROMs တွေထက် Error (Bugs) တွေ ပိုမိုများပြားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ Ported ROMs အတွက် Bugs Solved ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Ported ROMs ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Porter ကို ဆက်သွယ်မှသာရပါလိမ့်မယ်။
အချို့သော Ported ROMs တွေမှာ MIUI Developer ROMs တွေလိုမျိုးပဲ Update version တွေအလိုက် Incremental ROMs pack (update pack) လေးတွေထုတ်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။
MIUI Ported UnOfficial ROMs တွေကို ဒီ Links တွေကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ် >http://en.miui.com/thread-4717-1-1.html ||| http://en.miui.com/thread-7898-1-1.html
‪#‎China‬ Build MIUI ဆိုတာ ???
China Build MIUI တွေမှာဆိုရင် Google Apps တွေ Google Services (GApps) တွေ မပါရှိပါဘူး။ Language အနေနဲ့ Chinese Language နှစ်ခုနဲ့ English Language ဆိုပြီး (၃) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် China Build MIUI တွေမှာ Chinese Apps တွေနဲ့ Chinese Services တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် Storage Space ကို သက်သက်နေရာပိုစေတာတွေ့ရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Chinese Apps တွေက Chinese လူမျိုးတွေအတွက်တော့ အလွန်အသုံးတည့်တဲ့ Apps တွေဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သုံးဖို့အဆင်မပြေတဲ့ Apps တွေများပါတယ်။ China Build MIUI ROMs တွေမှာ Google Apps မပါဘူးဆိုပေမယ့် Google Service Frameworks, Google Account Manager, Google Play Services နဲ့ အခြားသော မိမိအတွက်လိုအပ်သည့် Google Apps တွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
‪#‎Fastboot‬ ROM ဆိုတာ ???
Fastboot ROMs တွေဟာ *.tgz format နဲ့လာပါတယ်။ Fastboot ROMs တွေကို မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို Xiaomi ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး များသောအားဖြင့် Fastboot ROMs ကို Service Technicians တွေနဲ့ ဖုန်းကောင်းကောင်း ကလိတတ်သူတွေ အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ Fastboot ROMs အသုံးပြုဖို့ PC (Personal Computer) ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ တွဲဖက်အသုံးပြုမယ့် PC မှာ Fastboot သိရပါမယ်။ ထို့အတူ Fastboot ROMs ကို သက်ဆိုင်ရာ Devices မှာ Flash လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Flash tools တွေလိုအပ်ပါတယ်။ Official အနေနဲ့ MiFlash (or) Mi PC Suite တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Flash tools နဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်ဖုန်းကို Fastboot Mode (or) Qualcomm Mode (or) Download Mode များဖြင့် တင်နိုင်ပါတယ်။ Fastboot Mode ၀င်ဖို့အတွက် ဖုန်းကို Power Off လုပ်ပါ။ Power Button + Vol - တွဲနှိပ်ပြီး Fastboot Mode ၀င်နိုင်ပါတယ်။ Fastboot ROMs ရဲ့ *.tgz ကို ဖြည်လိုက်မယ်ဆိုရင် Fastboot Script file တွေနဲ့ Image file တွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Fastboot ROMs script တွေဟာ Windows version အတွက် *.bat ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Linux version အတွက် *.sh ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပါရှိပါတယ်။
ဒီပို့စ်ဟာ မတူကွဲပြားတဲ့ ROMs တွေအကြောင်းရှင်းလင်းတဲ့ပို့စ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Fastboot ROMs အသုံးပြုပုံကို နောက်ထပ်ပို့စ်တစ်ခုဖြင့် တင်ပေးပါ့မယ်။ Fastboot ROMs တွေနဲ့ အခြား ROMs တွေအကြောင်းကို ဒီ Links မှာ လေ့လာသိရှိရယူနိုင်ပါတယ် > http://en.miui.com/a-234.html
‪#‎Credit_MIUI‬ Official Forum
Myanmar Xiaomi Fans